Maitiro ekutarisa mamiriro ebhatiri rako neaya matanho akareruka | IPhone nhau
Sezvo nguva inopfuura, zvakajairika kuti iwe uone kuti iyo bhatiri remuchina wako weApple yekupedzisira zvishoma uye zvishoma. Kazhinji, izvi zvakajairika uye hatifanirwe kunetseka kana kutya nekuti nekushandisa, bhatiri rinopera.
Kana isu tikacherekedza kuti iyo nguva yeiyo bhatiri ipfupi kwazvo uye isu tanga tiine yedu iPhone kana iPad kwenguva pfupi zvingave zviri nyore bata wepamutemo basa rehunyanzvi kutarisa mamiriro ayo, sezvo angave akaremara mufekitori uye achida kuichinja. Kana chiri chekuvimbiswa, kushanya kwacho kunofanirwa nekuti hakuzotipe chero chinhu uye nekufamba kwenguva kuchatibatsira. Kana iyi iri nyaya yako, tinokurudzira kuti iwe wakamboverenga chinyorwa chakaburitswa patinotaura nezve vimbiso mabhatiri.
Mutsamba yambotaurwa, tataura nezvekutsiva bhatiri kunyangwe iri pasi pewarandi, zvinokwanisika kuti icharambwa kana ikasasangana nemamiriro eApple, ndiko kuti kutenderera vanofanira kuva pakati pe80% ne100% uyezve hauna kumbobvira washanyira chero humwe husingabvumirwe technical technical service.
1 Chii chinonzi kuchajaira?
2 Ndeapi maificha ekuchaja anoita yangu iPhone nePad
3 Ndinoongorora sei chimiro chebhatiri rangu?
3.1 Kuisa App
3.2 Kuisa iBackupbot pane yedu Mac
3.3 Zvinorevei chikamu chimwe nechimwe cheruzivo?
Chii chinonzi kuchajaira?
Un kutenderera kutenderera Ndipo patinopedzisa 100% yebhatiri, kungave mubhadharo kamwe chete kana mune akati wandei, ndiko kuti, tinotanga mangwanani neiyo iPhone pa100% bhatiri uye kana masikati achisvika isu tasara ne50% uye tinozviisa kuti zvibhadharwe. zvachose. Tichava takaita hafu yekuchaja kutenderera. Kana husiku tikadzoreredza kubhadharisa kana yasara ne50% uye isu tinoibvisa kana yazara zvakakwana, tinenge taita yakazara mutero kutenderera. 50% masikati plus 50% usiku inoita huwandu hwese zana%.
Ndeapi maificha ekuchaja anoita yangu iPhone nePad
Zvepamutemo hapana chaiyo nhamba inotitaurira kuti mangani majairidziro macustoms edu aachave nawo, asi kune masainzi manhamba ayo anofungidzira angangoita mazana mashanu ekuchaja macircuit eiyo iPhone uye angangoita 500 akazara macircule sehupenyu hwePadad yedu. Sezvatiri kutaura, ivo havazi epamutemo data neApple, ivo vanongova fungidziro izvo zvakaitwa mushure mekudzidza akati wandei makesi.
Ndinoongorora sei chimiro chebhatiri rangu?
Zvinokwanisika kuti mushure mekuverenga zvese zviri pamusoro apa unoda kuziva mamiriro ebhatiri rako uye kuti mangani macircule anayo. Aya maitiro akareruka atinogona kuita nenzira mbiri. Yekutanga uye yakapusa ichave yekuisa iyo yemahara app matiri iOS mudziyo, ichitipa ruzivo rwekutanga, asi kune rimwe divi isu tine imwezve sarudzo izere iyo inoda kuiswa kwe app paMac yedu kana Windows.
Kana yako iPhone ichida kutsiva bhatiri, unogona tora bhatiri rako kutsiva kubva iyi link.
Chinhu chekutanga chatinofanira kuita kupinza iyo App Store kubva ku iPhone yedu kana iPad.
Tichingove ikoko, isu tinotsvaga iyo app inonzi: Hupenyu hweBhatiri. Ive nekuchenjerera kwazvo kana uchitsvaga, sezvo paine akati wandei ane mazita akafanana uye izvo zvinogona kutikanganisa Zviri zvachose vakasununguka. Pazasi iwe unogona kuona kuti zviri sei.
Kana tava kurodha pasi nekupinda mariri tarisa neperesenti. Iyi muzana inoreva mamiriro ebhatiri maringe neyaakatanga mamiriro, ndiko kuti, kwatiri zvinoratidza 93% zvine chekuita nedunhu raivemo patakatenga chigadzirwa.
Kana tichida kuziva kuti chikamu ichi chakaenzana nei, mumenu kuruboshwe tinogona kuisa sarudzo «Raw Data".
Ikoko, ichatiratidza bhawa neiyo yapfuura muzana patinogona kuona kuti 93% yakaenzana sei 1600mAh kubva 1715mAh izvo zvandaive nazvo pakutanga.
Bhawa riri pazasi payo rinoreva iyo zvazvino muripo pamwero yemudziyo wedu.
Sekuona kwedu, chiri chinhu chakakosha uye chiri nyore, asi chinotipa isu data rakakodzera kuti tizive chinzvimbo chebhatiri redu munguva chaiyo. Sezvatakambotaura, tinogona kuenda kumberi uye nekuziva kuti mangani macirculi atakapedza.
Kuisa iBackupbot pane yedu Mac
Chinhu chekutanga chatinofanira kuita kudhawunirodha iyo app kubva kunotevera link, yemahara uye isina njodzi. Dhawunirodha iBackupbot yeMac. Dhawunirodha iBackupbot yeWindows.
Iyi Anwendung ainyanya kushandiswa kugadzira negadziriro yeparutivi makopi edu namano asi iyi haisi iyo nyaya inotinetsa izvozvi. Nayo tinogona zvakare kutarisa mamiriro ebhatiri redu.
Nhanho inotevera ichave batanidza iPhone yedu kana iPad kune komputa kuburikidza neMheni tambo. Tichingobatanidza iyo, iyo app ichaona iyo kifaa uye ichaonekwa seinotevera (1):
Tevere isu tinofanirwa enda kune yedu kifaa (iPhone mune yedu) uye neruzivo nezvazvo zvichaonekwa, sezvatinoona mumufananidzo. Tinofanira tinya pa «More mashoko(2)
Patinopinda imomo hwindo rinotevera rinozoonekwa uko, pakati peimwe ruzivo, patinoona mamiriro ebhatiri redu.
Zvinorevei chikamu chimwe nechimwe cheruzivo?
CycleCount: nhamba yechaji yakazara majaira ako mudziyo ane.
Dhizaini Kugona: kuchaja kugona kwechigadzirwa chako panguva yekutenga.
FullChargeCapacity: mutoro wepamusoro waunogona kusvika nefoni yako panguva iyo cheki iri kuitwa.
Mamiriro: mamiriro ebhatiri mune akajairwa mazwi.
Kana iwe uine chero mibvunzo neiyo data yakaonekwa, usazeze kutinyorera mhinduro uye isu tinokwanisa kukubatsira.
Kana yako iPhone ichida bhatiri shanduko kudzoreredza kuzvitonga kwayo kwepakutanga, unogona tora bhatiri rako kutsiva kubva iyi link.
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » iPhone » Zvidzidzo uye zvinyorwa » Maitiro ekutarisa mamiriro ebhatiri rako neaya matanho akareruka
Kune vanodzivirira veiyo hapana jeri. Mu cidya iApp yakazara (iyo iyo yakabviswa) ichikupa ruzivo rwakawanda, pasina kukosha kwe mac ... Asi zvirokwazvo jeri nhasi harina musoro
Ini ndaive mushandisi we mac, asi iyo macbook yakafa, kunyangwe zvakadaro ndinorangarira kuti paive nesarudzo mune imwecheteyo system iyo inokuudza zvese izvo pasina kuisa chimwe chinhu
yakazara ma uye neruzivo rwakawanda kunyangwe kubva kune rakaomarara diski
Pane yangu 10.5-inch Ipad inoratidza izvi:
Ndine kusahadzika mu FullChargeCapacity. Zvakanaka?. Ndatenda
Ini ndinowana chinhu chimwe chete saka ndinofungidzira kudaro ... ‍♀️
Pindura kuna Rem
Zviri Mukati akadaro
Mhoro. Iyo yakafanana data muFullChargeCapacity 100
Pane iyo iPad Pro 11 (2018)
Pindura kuna Isi
John Tenorio akadaro
Mhoro kwandiri ndinowana mhedzisiro iyi:
Kuverenga kutenderera: 1048
Unyanzvi hweDesigne: 7340
Yakazara Charge Kugona: 100
Mubvunzo wangu ndewekuti nei iwo manhamba achibuda akakwirira kupfuura iwo muenzaniso iwe wawakaisa mune yako posvo. Ipad bhatiri rangu rinoda kusvika kangani kuti risvike panogumira? Ndatenda
Pindura Juan Tenorio
Maitiro ekudzivirira otomatiki kuvhura kwe "Iyezvino Kurira" muwatchOS 4
Iyo FCC inoda Apple kumutsidzira FM redhiyo paPhones